देशभर ७३ स्थानमा सहुलियत पसल « Janata Samachar
देशभर ७३ स्थानमा सहुलियत पसल
काठमाडौं । सरकारले चाडबाडलाई लक्षित गरी देशैभर ७३ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । पसलबाट उपभोक्ताले सहुलियत हुन्छ भनेर खुशी हुन खोज्नु र सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेमा नागरिकमा आशंका व्याप्त रहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानमार्फत् सरकारले चाडपर्व लक्षित गर्दै घुम्ती पसलसहित झण्डै बीसको संख्यामा सहुलियत पसल उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । देशैभर ७३ स्थानमा यस्ता पसल सञ्चालनमा आएका छन् । करिब पौने तीन करोड जनसंख्यालाई सरकारी सहुलियत पसल उही परम्परा धान्ने कार्य भन्दा केही भएको जस्तो देखिन्न । सरकारीस्तरबाट यसलाई स्विकार गरिएको छ ।
सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न खोजेको भनेपनि सहुलियत पसल न सरकारले चाहेजस्तो छ, न उपभोक्ताले चाहेजस्तो नै । उपभोक्ताले सरकारप्रति गरेको आशा निराशा परिणत मात्र भएको छ । टाढा टाढाका उपभोक्ताले सिमित स्थानमा सञ्चालित सुहलियत पसलबाट कसरी राहत पाउलान र खोई ?
साँच्चै सहुलियत दिने हो भने सरकारले तीन महिना देशभरका पसलबाट विशेष छुटमा उपभोक्तालाई सहुलियतमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने कार्य गर्न सक्नुपर्छ ।
उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने करिब २ लाख पसललाई डेढ दर्जन सहुलियत पसलले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्लान् ? करोडौं खर्चेर चाडबाडमा सकेसम्म उपभोक्तालाई राहत दिउँ भन्ने उद्देश्य राख्ने सरकार आखिरमा सुपथ मूल्य नजिकका सर्वसाधारणलाई राहत दिई दूर दराजका उपभोक्तालाई किन विभेद गरिरहेछ ? सरकारले सर्वसाधारणको यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुपर्छ ।
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीअन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत पाँच प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् । सेवाग्राहीसंँग
काठमाडौं । मुस्ताङ, चुरेलगायत क्षेत्रमा युरेनियम भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान